Maxay bushimihiisa bisadu u soo daataan? | Bisadaha Noti
Maxay bushimihiisa bisadu u soo daataan?
Sigaarka bisadaha, oo sidoo kale loo yaqaan 'vibrissae', waa qayb aad muhiim ugu ah jiritaanka jirka. Waad ku mahadsan tahay iyaga, waxay ogaan karaan hubaal haddii ay la jaan qaadi karaan waddo cidhiidhi ah, waxayna sidoo kale ka caawineysaa inay "wax u arkaan" meel u dhow, wax si anfacaya ku yimaada. Sababahan awgood, waa in aan waligood la jarin, laakiin Maxaa dhacaya haddii ay iyagu iska dhacaan?
Haddii aad ka heshay vibrisa dabaqa oo aad ka walwalsan tahay dhogortaada, akhri si aad u ogaato maxaa afeefyadayda bisaddu u soo daadataa.
1 Maxay u dhacayaan?
1.2 Welwel iyo / ama walwal
1.4 Dulinka banaanka
2 Misbaaxyadiisu dib ma u soo bixi doonaan?
3 Waa maxay muufada loo yaqaan bisadaha?
4 Immisa hawraaris waa in bisad leedahay
5 Maxaa dhacaya haddii aad jarto shaarbo bisad?
6 Khuraafaadka ku saabsan bisadaha buskudka
7 Talooyin la xiriira buskutka bisadaada
Maxay u dhacayaan?
Fiiqyada bisadu way ku dhici karaan isla sababaha ay dhogorta u dhacdo, taas oo macnaheedu yahay in mabda 'ahaan aynaan walwal ka qabin. Xitaa sidaa oo ay tahay, maadaama ay jiraan sababo dhowr ah oo ay u dhici karaan, aan aragno waxa ay tahay inaan ka qabanno xaalad kasta:
Ama xasaasiyadda cuntada, maqaarka, ama nooc kasta oo kale, xaqiiqda dhabta ah ee dhibaatadu waxay ka dhigi doontaa dhogor xoq badan. Intaas waxaa sii dheer, waxay noqon kartaa mid aad u dhib badan, sidaa darteed timaha iyo muufbaxa way dhici karaan
Maxaa la sameeyaa? Waxa ugu fiican ee lagula taliyaa waa in la geeyo dhakhtarka xoolaha, gaar ahaan haddii aan aragno in cuncunka ka sokow uu leeyahay hindhiso, qufac, dheecaan indhaha (legañas) iyo sanka, maqaarka oo casaa.
Welwel iyo / ama walwal
Bisadu waa xayawaan deggan, oo leh dulqaad yar oo walbahaarka ah iyo xitaa walaac yar. Markaad ku nooshahay jawi qasan oo qoys, haddii qoysku guurayo ama haddii xubin cusub ku jirto guriga, waxaad dareemi kartaa xumaan heer aad u gaarto in dhaqankaagu isbeddelayo: Wuxuu noqon doonaa mid difaac ah, wuu weerari karaa, hadii intaasna aysan ku filnayn, timihiisa iyo shaarubahu way dhici karaan.
Maxaa la sameeyaa? Waxa ugu muhiimsani waa in la helo ilaha cilladahaagu ka muuqdo oo la daaweeyo. Daaran maqaalkan waxaan kuu sheegeynaa sababta bisadu u walwasho oo ay u soo gasho kan kale sidee u caawin kartaa.
Iyadoo aan loo eegin waxa bisadu tahay, waxay timo timo laba jeer sanadkii: marka cimiladu ka gudubto qabow iyo qabow, iyo dhinaca kale. Wareegtada dareenkan waxay u dhaqmaan si la mid ah timaha jirka ee caadiga ah, taas oo ah, way soo baxaan, koraan, qaan gaadhaan oo aakhirka ay soo baxaan.
Maxaa la sameeyaa? Haddii aynaan arkin astaamo kale oo bisadu nolol caadi ah ku socoto, waxba lagama qaban doono.
ka boodada, shilinta ama dulin kale ayaa sababi kara in timaha dhogortayadu hoos u dhacaan, khaasatan haddii dhibaatadu culus tahay. Cuncunku wuxuu noqon karaa mid aad u daran, markaa markay taasi dhacdo xoqidoonaa, oo sababi kara bidaar jidhkeeda iyo Dhimashada afkooda.
Maxaa la sameeyaa? Ka soo horjeedka dulinka wax u dhigma ma ahan antiparasitic. Ha ahaato mid buufin, biibiile, silsilado ama kaniiniyada, haddii aan daaweynno ka hortag ah sannadka oo dhan waxaan ilaalin doonnaa bisadda. Haddii ay dhacdo inaad horeyba u haysatay, sidoo kale alaabooyinkan waan baabi'in karnaa. Dabcan, haddii dhibaatadu dhab ahaan tahay mid daran oo mid timihiisu midabkiisu casaan iyo bidaar yeeshay, ama haddii aan ka shakinno inuu qabo isnadaamiska, waa inaad geysaa dhakhtarka xoolaha si loo daaweeyo.
Sida aan arki karno, waxaa jira sababo kala duwan oo muusikiistu u dhici karaan. Sikastaba, waa inaan ogaano inay dib u soo koraan, laakiin waxaa muhiim ah inaan ogaanno sababta ay u dhacaan tan iyo markii, haddii ay tahay dhibaato caafimaad, dhogorta ayaa u baahan doonta caawimaad.
Misbaaxyadiisu dib ma u soo bixi doonaan?
Haddii buskudka bisadaada ama qaar iyaga ka mid ahi ay dhaceen, markaa waa caadi inaad adiga ka fikirto inay dib u soo noqonayaan iyo in kale. Haddii buskudka bisadaadu ka dhacday, waad ku kalsoonaan kartaa inay dib u kori doonaan. Hadday si dabiici ah u dhaceen ama la jarjaray. Wareegga koritaanka sanjabiisha ee bisaduhu wuxuu la mid yahay wareegga koritaanka timaha ee jidhkooda.
Marar badan, sanjabiisha bisaduhu si dabiici ah ayey u dhacaan ka dibna dib ayey u koraan. Markaa haddii midkood ku dhaco, waxaa jiri doona shaarib kale oo dib u soo baxa. Waxa lagu sharraxay ka sokow, waxaa muhiim ah in la ogaado waxa ay u yeeraan bushimuhu bisadaha, maaddaama shaqadooda ay aad muhiim ugu tahay nolosha geedaha, Taasi waa sababta aysan waligood jeex jeexin ama looga qaadin!
Waa maxay muufada loo yaqaan bisadaha?
Afkaarta bisadaha waxaa sidoo kale loo yaqaan 'vibrissae', mid waxaa laga heli karaa muuska, haddii kale waxaad sidoo kale ka heli kartaa qaybaha kale ee jirka, sida lugaha. Waa timo ka sii dhumuc weyn kuwa jirka intiisa kale iyo ka caawi iyaga inay ogaadaan haddii meelaha ay rabaan inay ku habboon yihiin ama haddii ay tahay inay helaan meel kale oo ay ka gudbaan.
Waxay u eg yihiin dareemayaal bisadda, maaddaama xididkoodu leeyahay dareemayaal badan oo xasaasi ah oo si toos ah ula xiriiraya maskaxdooda una oggolaanaya inay cabbiraan masaafada u dhexeysa jidhkooda iyo walxaha iyo meelaha ku xeeran. Xitaa waxay awoodaan inay cabiraan cadaadiska hawada ama wax kastoo iyaga taabto.
Sidoo kale waa muhiim in la ogaado in sanjabiishaha waxay ka caawisaa inay muujiyaan sida ay dareemayaan iyo dareenka ay la kulmaan. Haddii ay leedahay daboollo dabacsan, bisaddaadu sidoo kale way nasan doontaa, laakiin haddii ay horay u hayso waa feejignaanaysaa haddii ay wejiga ku dhegtana way baqaysaa ama xanaaqaysaa.
Immisa hawraaris waa in bisad leedahay
Si ay hawadu u shaqeyso si fiican ayey u shaqeysaa waxaa muhiim ah in bisaduhu leeyihiin inta udhaxeysa 15 iyo 24 dhawaqyo loo qaybiyey inta u dhaxeysa muuska iyo jirka intiisa kale. Badanaa waxay ku jiraan laba saf oo isle'eg qayb kasta oo jirka bisadda ka mid ah. Aragtida bisaduhu aad ugama fiicna marka waxay ku tiirsan yihiin timahooda si ay u awoodaan inay wax cabbiraan oo ay si sax ah isu toosiyaan.
Maxaa dhacaya haddii aad jarto shaarbo bisad?
Waxaa jira dad rumeysan in aysan waxba dhicin haddii dhimayaasha bisadooda la jaro, laakiin waa inaan tan la yeelin. Intaas waxaa sii dheer inaad ka qaadeyso suurtagalnimada jihaynta si sax ah, xitaa haddii aysan dhiig bixin ama aysan dareemin xanuun haddii la jaray, waa inaan la sameyn.
Haddii shaarubaha lagaa jaro ma awoodi doonaan inay waxkala fahmaan wax u dhow, jahayntooduna si aad ah ayey u xumaan doontaa maadaama aysan awood u lahayn inay si fiican u kala soocaan sheyga u dhow ama ka fog, ma ogaan doonaan inay ku habboon yihiin meel bannaan iyo in kale ... iyaga sababa.
Khuraafaadka ku saabsan bisadaha buskudka
Waxaa jira xoogaa aaminaad been ah oo ku saabsan sanjabiisha bisadaha oo ay ugu fiican tahay in la joojiyo aaminaadda sida ugu dhakhsaha badan, maxaa yeelay sii wadista aaminaadda waxay u keenaysaa raaxo darro badan xayawaanka.
Looma baahna xayawaanka
Dib uma koraan
Hadday jaraan way xanuunaysaa
Hadday jaraan way dhiig baxaan
Haddii la jaro, waxba ma dhacaan
Haddii ay jarjarayaan waxba ma yeeli doono
Haddii shaarubaha la gooyo guriga kama baxayaan
Haddii la jaro waxay ku noqon doonaan guryahooda iyagoo aan lumin
Waxay awood u yeelan karaan inay cagahooda caga dhigtaan haddii ay ka soo dhacaan dherer cayiman
Talooyin la xiriira buskutka bisadaada
Waa fikrad fiican inaad tixgeliso qaar ka mid ah tilmaamaha ku saabsan buskutka bisadaada, sidaas darteed wuxuu dareemi doonaa kalsooni badan inuu kula joogo:
Ka dhig isaga mid ku qanacsan quudiyaha. Waxaa lagugula talinayaa in weelka ama weelka aad dhigayso cuntada uu yahay mid ballaaran oo aan gacmeed lahayn.
Ha taaban afkiisa. Sababtoo ah xasaasiyadda ay ku leeyihiin afkooda, waxaa fiican inaadan ku dhufan.
U fiirso xaaladooda. Waad ku garan kartaa in bisadu ay ka sii yar tahay ama ka yar tahay adigoo u kuur galaya afkiisa, sidaan kor ku soo sharaxnay.
Sidaad aragtay, sanjabiisha bisadaha aad ayey muhiim ugu tahay iyaga. Dareenkaan, waxaa lagama maarmaan ah inaad ixtiraamto oo aadan waligaa jarin. Intaas waxaa sii dheer, sidoo kale waa muhiim inaad dareento deganaan haddii ay si dabiici ah ugu dhacaan, maxaa yeelay wey soo kori doonaan! Waa badan tahay, haddii ay si dabiici ah u dhacaan, dareenkaaga jihada isma beddelayo, maxaa yeelay waa meerto dabiici ah oo jirkaaga ah: mid baa dhaca si midkale u soo baxo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Riyooyin » Maxay bushimihiisa bisadu u soo daataan?
Sida loo sameeyo bisad ay u aqbasho bisad
Da'dee ayaa bisad loo oggolaan karaa